Posts for 2013 | Mozilla Myanmar | Page 2
Mozilla Myanmar is Invited to Mozilla Summit 2013
Good Morning Mozillian, Would love to shareabig News, Today Mozilla is invited to the whole world Mozillian who contribution to Mozilla ,Among there Our Mozilla Myanmar has invited. Me (Chit) and Tin Aung Lin will proudly attend First … Continue reading
Tags: Community, Mozilla, Mozilla Myanmar, Mozilla Summit 2013
မီးမြေခွေး မြန်မာဘာသာနဲ့ စမ်းသပ် ထွက်လာပြီးနောက် ဆက်ပြီး လုပ်ဖို့ရာ အများကြီး ကျန်ပါသေးတယ် ။ Mozilla ဝတ်ဆိုဒ်တွေ ကို ဘာသာပြန်နေတာလဲ တော်တော်များများ လိုနေပါ သေးတယ် ။ အကူအညီတွေ လိုအပ်ပါတယ် ။ ကူညီခဲ့ဖူး သူတွေ လဲ တစ်ချို့အပြောင်းအလဲတွေ ကြောင့် မသိလိုက်ရ ဖြစ်နေ ရင်လဲ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် ။ ကူညီချင်တဲ့ လူတွေ အတွက်လဲ ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာ သိသွားအောင် ပြောပြချင်ပါတယ်။ အရင် က ကျွန်တော်တို့ ဘာသာပြန်ခဲ့ကြတာ … Continue reading
Received Welcome Pack
Today early morning , I go to airport to welcome back one of my friends from Singapore and he is bringing me Mozilla Rep Welcome Pack which is directed to his address foraconvenient ship. All of our Mozilla … Continue reading
Tags: Mozilla, remo, rep, welcomePack
Categories: L10n, Mozilla Myanmar, Who We Are